DEGDEG: Weriyihii VOA-da ee magaalada Beledweyne oo la xiray - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. DEGDEG: Weriyihii VOA-da ee magaalada Beledweyne oo la xiray - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
DEGDEG: Weriyihii VOA-da ee magaalada Beledweyne oo la xiray
Wararka laga helayo magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in goor dhoweyd la xiray weriyihii Idaacadda VOA-da laanteeda Afka Soomaaliga.
Xariga weriye Xuseen Xasan Dhaqane ayaa la sheegay inay ka danbeeyeen maamulka gobolka Hiiraan, iyadoo aan faahfaahin laga bixin sababta xarigiisa.
Weriye Xuseen Xasan Dhaqane ayaa ah wakiil wareedka VOA-da laanteeda Afka Soomaaliga, waxayna wararka qaar sheegayaan in loo heysto war idaacadda laga sii daayay oo ku saabsan mooshin laga keenay madaxweynaha Hishabeelle.
Weriye Xuseen Xasan Dhaqane
Previous articleDAAWO VIDEO: Madaxweyne Farmaajo oo sheegay in lagu soo barbaariyay Lafoole & Dardaaranka wiil yar
Next articleDHAGEYSO Afhayeenka Alshabaab: “Xasan keena ama Farmaajo keena dagaalku ma joogsanayo…”